बच्चाको दिमाग तेज बनाउनको लागी खुवाउनै पर्ने खानेकुरा ! जानी राखौं - eKhojkhabar
बच्चाको दिमाग तेज बनाउनको लागी खुवाउनै पर्ने खानेकुरा ! जानी राखौं
बच्चाको खानपानमा कुनै पनि कमजोरी आयो भने बच्चाको शाररिक र मानषिक बिकास राम्रोसँग हुन पाउदैन । मानिस स्वास्थ्य रहनको लागी उसको मानषिक रुपमा पनि स्वास्थ्य हुनुपर्छ ।
हामीले बच्चाको खानामा यस्ता खानेकुराहरु सामेल गर्नुपर्छ जसले उनीहरुको दिमागलाई तेज बनाउन मद्धत गर्छ । यदि बच्चाको दिमाग तेज भयो भने उनीहरुलाई पढ्न र कुनै पनि कुराहरु राम्ररी बुज्न सजिलो हुने गर्छ । त्यसैले सानैदेखी बच्चालाई पौष्टिक आहाराले भरिपुर्ण खानेकुराहरु खुवाउनु पर्छ ।
बच्चाको दिमाग तेज बनाउनको लागी खुवाउनु पर्ने खानेकुराहरु यस्ता छन् :
१) हरियो सागसब्जी : बच्चाको दिमागको विकासका लागि हरियो सागसब्जी खुवाउनुपर्छ । बच्चालाई ६ महिनापछि ठोस आहार दिइन्छ । त्यसपछि उसलाई खानामा पालुंगो, बन्दा जस्ता पदार्थ दिन सकिन्छ । यिनमा ओमेगा ३ फ्याटी एसिड पाइन्छ।
२) ओखर : ओखर खानाले पनि दिमाग तेज हुन्छ । ओखरलाई बिहान नास्ता या दिउँसोको खानामा समावेश गर्न सकिन्छ । यसमा ओमेगा ३ फ्याटी एसिडका अलावा फाइबर, भिटामिन बी, म्याग्नेसियम र एन्टी अक्सिडेन्ट अधिक मात्रामा पाइन्छ । यसैले बच्चाको खानामा यसलाई समावेश गर्नुपर्छ । बच्चालाई किसमिस, बदाम पनि खुवाउन सकिन्छ।
३) माछा : ९ महिनाको उमेरपछि बच्चालाई मासु र माछा पनि खुवाउन सकिन्छ । बच्चाको दिमागको पूर्ण विकासका लागि माछा खुवाउनाले ओमेगा ३ फ्याटी एसिड पाइन्छ । यसैले गर्भावस्थाकै क्रममा आमालाई माछा खुवाउनुपर्छ।
४) दूध र दही : बच्चाको दिमागी विकासका लागि दूध र दही दिन सकिन्छ । दहीले दिमागको कोषलाई लचिलो बनाउँछ र यसले संकेत लिने र त्यसमा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउने क्षमता बढ्छ । चिल्लोरहित दूध प्रोटिन, भिटामिन डी र फस्फोरसको भण्डार पनि हो, जो दिमागका लागि जरुरी हुन्छ ।